सोंच्दै नसोंचेको सफलता
सोंच्दै नसोंचेको सफलता हात पारेका छन् गाविन्दले । विगत एक दशकभन्दा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका उनी अहिले आफ्नो पढाईलाई मात्र अगाडि बढाउँदै छैनन्, गाउँका भाइबहिनीहरुलाई राजनैतिक क्रियाकलापमा नभई विद्यालय पढ्न पठाउनु पर्छ भन्दै हिंड्न थालेका छन् । आफूभन्दा अग्रजहरुसँग बाल अधिकार, बाल संरक्षणका तथा शान्ति शिक्षाको बारेमा बहस गर्छन् अनि चेतना फैलाउँदै हिंड्छन् ।
धनकुटा जिल्लाको बेलहारा–४ बस्ने गोविन्द घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शसस्त्र द्वन्द्वमा हिंड्न बाध्य भएका थिए । बर्षभरिको कमाईले ६ महिनासम्म खान लगाउन पुग्दैन थियो । पढ्नको लागि कापी कलम जुटाउन झनै गा¥हो हुन्थ्यो । त्यत्तिबेलै आफ्ना दौंतारी साथीहरुको लहैलहैमा लागेर गोविन्द तत्कालिन सशस्त्र समूहमा आवद्ध भए । ३ बर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा नै आवद्ध भएर रहँदा धेरै दुःख, कष्ट भोगेका गोविन्द भन्छन् “३ दिनसम्म भोकै बस्दाको क्षण सम्झँदा अहिले पनि रुन आउँछ ।” यस्तै विभिन्न प्रतिकूल अवस्था भएपछि उनले सो समूह बाट घरमा फर्की भारतिय कुनै शहरतिर जाने सोंच बनाइरहेको बेला सल्भ–नेपालको सम्पर्कमा पुगेपछि उनले नसोंचेको सफलता हात पारेका छन् । उनले भने “सल्भ–नेपालबाट सहयोग नपाएको भए मैले गाउँमा बस्ने र पढ्ने स्थिति नै थिएन, म अहिले भारतको कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुन्थें होला ।”
गोविन्दलाई सल्भ–नेपालबाट संचालित कफाग÷क्याक कार्यक्रमले पढ्नको लागि सहयोग पु¥यायो । कक्षा ८ देखि १० सम्म निरन्तररुपमा पढ्नलाई सहयोग पाए । गत वर्ष एस.एल.सी. पास गरेपछि हाल उनी धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा आई. एड. दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । जीविकोपार्जनमा सहयोगको लागि बाख्रा पालन गर्न पनि सल्भले सहयोग गरेको थियो । हाल ५ वटा बाख्रा उनीसँग छन् । बाख्रा पालनबाट भएको आम्दानीले अहिले उनले टमाटर खेति पनि गर्न थालेका छन् । घर परिवारबाट पूर्ण सहयोग पाएका गोविन्द बाख्रा पालन र टमाटर खेतिबाट भएको आम्दानी देखेर मख्ख परेका छन् भने आम्दानीले घर खर्च र भाइबहिनीलाई पढाउँदै आफू पनि पढ्दैछन् ।
हाल गोविन्दले सल्भ–नेपालबाट सञ्चालित कफाग कार्यक्रममा उनको गाविस तथा अन्य केही गाविसमा कार्य गर्न सामुदायिक सहजकर्ताको रुपमा नै काम गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । जीवनोपयोगी सीप र शान्ति निर्माणसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लिने अवसर पनि गोविन्दलाई सल्भ–नेपालबाट नै मिल्यो । “द्वन्द्वमा आफूसँगै हिंडेका साथीहरुलाई सहयोग कार्यक्रमको बारेमा बताउँदैछु र आफूलाई सहयोग गर्ने अग्रजहरुसँग काम गर्दैछु ।” यसरी सानै उमेरमा सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय गोविन्द सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक रुपमा स्वस्थ छन् ।
गोविन्द बेलहारा गाविसमा स्थित नमूना बालक्लव संजालका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहाकार समूहका अध्यक्ष छन् । उनले नै बेलहाराको सम्पू्र्ण बालबालिकाहरुलाई बाल अधिकारको रक्षा तथा संरक्षण गर्न बालक्लवको स्थापनामा प्रमुख भूमिका खेलेका हुन् । “सायद हामीलाई गोविन्द दाईले स्पष्ट कुरा नबुझाउनु भएको भए हाम्रो बालक्लव यति सक्रिय र अगाडी बढ्ने थिएन होला भन्छिन्” बालक्लव संजालका हाल अध्यक्ष गीता पौडेल ।
हाल गोविन्द सो बेलहारामा विधिवत स्थापना भएको गाउँ बाल संरक्षण तथा सम्र्बद्धन उपसमितिको सदस्य भई जिम्मेवार भएर लागिपरेका छन् । “उनलाई नै हाल गाविसमा हुने सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठकमा बालबालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधीत्व गरीएको” बताउनु हुन्छ सो गाविसका सचिव श्री विनोद कुमार थापा । यी सबै कुराहरुको स्मरण गर्दा हाल गोविन्द गम्भिर मुद्रामा भन्छन् साँच्चे नसोचेको सफलता हात परेको छ ।
हाल उनी भर्खरै मात्र गठन गरि संचलानमा रहेको गाविस स्तरिय युवा संजाल बेलहाराका सदस्य समेत रहेका छन् । “युवा संजालमा पनि आफुले सिकेका कुराहरुलाई भरमग्दुर प्रयोग गरि आफू सामाजिक क्षेत्रमा लागीरहने भन्छन्” गोविन्द ।